DIY Micromitter Stereo FM Transmitter - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » DIY Micromitter Stereo FM Onye Ntugharị
N'ikpeazu! - Onye na-ebugharị FM stereo nke ahụ bụ ihe eji eme ka nri dịzie.
Igwe onyonyo ohuru a nke FM Micromitter nwere ike ikwusa ozi di nma nke n’ogologo nari iri abuo. Ọ dị mma maka ịgbasa egwu sitere na ihe ọkpụkpọ CD ma ọ bụ site na ebe ọ bụla ọzọ ka enwere ike iburu ya na ọnọdụ ọzọ.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọkpụkpọ CD n’ime ụgbọ ala gị, ịnwere ike iji Micromicer mee ka ihe mgbaàmà si na CD player na-ebugharị gaa na redio ụgbọ ala gị. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji Micromitter mee ka ihe mgbaàmà sitere na ihe ọkpụkpọ CD ime ụlọ gị gaa na onye nnabata FM dị n'akụkụ ọzọ nke ụlọ ma ọ bụ n'akụkụ ọdọ mmiri.
N'ihi na ọ dabere na otu IC, ngalaba a bụ nri mgbakwasị ụkwụ iji wuo ma dabara mfe n'ime obere igbe mmekọ plastic. Ọ na - agbasa na redio FM (ntụgharị 88-108MHz) ka enwere ike ịnata mgbaama ya na redio ọ bụla ma ọ bụ redio na-ebugharị.
Agbanyeghị, n'adịghị ka ndị na-ebugharị FM gara aga bipụtara na SILICON CHIP, njiri ọhụrụ a anaghị agbanwe agbanwe na igwe mgbasa ozi FM na-aga n'ihu. Kama, a na-eji ntụgharị DIP 4 ga-eji họrọ otu n'ime ugboro iri na anọ nwere. Ndị a dị na usoro abụọ sitere na 14-87.7MHz na 88.9-106.7MHz na usoro 107.9MHz.
Enweghị coils na-akụ
Fig 1: eserese eserese Rore Rohm BH1417F stereo FM transfere IC. Ihe odide ahụ kọwara otú o si arụ ọrụ.
Anyị bu ụzọ bipụta sigịnti stereo FM na SILICON CHIP na Ọktoba 1988 ma soro ụdị ọzọ na Eprel 2001. Dubbed the Minimitter, nsụgharị ndịa mbụ dabere na Rohm BA1404 IC nke ama ama nke na-anaghị emepụta ya ọzọ.
Na nkeji abụọ ndị a mbụ, usoro itinye n'ọnọdụ chọrọ nhazigharị nke ịgbado ọkụ slrite n'ime eriri abụọ (eriri igwe oscillator na eriri nzacha), ka mmepụta RF kwekọrọ ugboro ugboro ahọpụtara na onye na-anabata FM. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị nrụpụta ihe siri ike na nke a n'ihi na ndozigharị ahụ ama ama.
Karịsịa, ọ bụrụ na ịnwere dijitalụ (ya bụ, njikọta) onye na - anabata FM, ị ga - edobe nnata na otu oge ma jiri nwayọ nụ olu nnyefe “site” na ya. Na mgbakwunye, enwere mkparịta ụka dị n'etiti oscillator na ndozi mkpuchi eriri igwe na nke a gbagwojuru ụfọdụ ndị anya.
Nsogbu ahụ adịghị na nhazi ọhụụ, ebe ọ nweghị usoro nhazi usoro ugboro ugboro. Kama nke ahụ, naanị ihe ị ga - eme bụ ịtọ ugboro ugboro na - ebugharị site na iji ụzọ 4 DIP na-agbanwe wee pịa ugboro ole ihe ndozi na redio FM gị.
Mgbe nke ahụ gasị, ọ bụ naanị idozi otu eriri mkpuchi mgbe ị na-edobe onye na-ebugharị ya, iji tọọ maka ọrụ RF ziri ezi.
Nkọwa ndị akọwapụtara
FM stereo Micromison ọhụrụ ahụ bụ nke akpọchiri akpọchi ugbu a nke pụtara na ngalaba ahụ anaghị agbaghari ugboro ugboro. Na mgbakwunye, ndọtị, nkewa stereo, ụda mkpọtụ ụda mkpọchi na mkpọchi stereo na-akawanye mma na mpaghara ọhụrụ a ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ndị mbụ. Ndị nkọwapụta ahụ nwere nkọwa ndị ọzọ.
BH1417F na-ebugharị IC
Fig.2: n'ogologo oge a dum putara ihe eji eme ya buputa ihe di iche (pin 5). Mkpesa 50ms dị gburugburu 3kHz na-ebute ịrị elu nke nzaghachi, ebe 15kHz dị ala na-agafe na -emepụta ọdịda na nzaghachi n'elu 10kHz.
N’ime imewe ihe ohuru a bu BH1417F FM transreo IC nke ulo oru Rhom mere. Dịka anyị kwuworo, ọ na-anọchi ugbu a siri ike ịchọta BA1404 nke ejirila na atụmatụ ndị gara aga.
Fig.1 na-egosi njiri mara nke BH1417F. Ọ na-agụnye eriri nhazi niile achọrọ maka nnyefe stereo FM yana ngalaba njikwa kristal na-enye njigide ugboro ole ọ bụla.
Dịka egosipụtara, BH1417F gụnyere ngalaba nhazi ọdịyo abụọ dị iche iche, maka ọwa aka ekpe na aka nri. A na-etinyere ụda olu aka ekpe-pin na pin 22 nke mgbawa, ebe a na-etinye akara ọwa nke aka nri na pin 1. A na-etinye akara ụda olu ndị a na sekit na-ekwusi ike nke na-akwalite ugboro ugboro ahụ karịa oge 50ms oge niile (ya bụ,. oge ndị ahụ dị elu karịa 3.183kHz) tupu nnyefe.
Etu, eji nkwalite iji meziwanye nrịgo maka mkpọtụ nke mgbama FM natara. Ọ na-arụ ọrụ site na iji mgbakwunye de-mesiri ike dị na nnata iji nwetaghachi ume ugboro ugboro mgbe agbadachara, ka ewee meghachi omume ugboro ugboro ka ọ dị mma. N'otu oge ahụ, nke a na-ebelata myiri nke ga-apụta ìhè na mgbama ahụ.
A na-atụnye ego nke ntinye aka site na ọnụ ahịa nke ikike nke jikọrọ pinni 2 & 21 (rịba ama: ọnụ ahịa nke oge ahụ = 22.7kΩ x nke ikike capacitance). N'ọnọdụ anyị, anyị na-eji ikike 2.2nF eme ihe 50nF iji tinye nkwalite mbụ ahụ gaa na XNUMXμ nke bụ ọkọlọtọ FM FM.
A na-enyekwa ihe nrịbama mgbaàmà n'etiti ngalaba nkwalite. Nke a na-agụnye ịgbanye akara gafere na mbido ụzọ ụfọdụ, iji gbochie ibubata usoro ndị a. Nke a n'aka nke na-egbochi nnuku mmachi ma belata imebi.
A na-emezi akara ndị aga-egosipụta nke ọma maka ọwa aka ekpe na aka nri site na usoro nzacha abụọ na-agafe agafe (LPF), nke na-ewepụ nzaghachi ya karịa 15kHz. Igwe ọhụụ a dị mkpa iji gbochie bandwidth nke mgbaàmà FM ma ọ bụ otu ụdị ọkọlọtọ nke ndị na-ebugharị FM na-agbasa ozi.
Fig.3: ụda nke ugboro ugboro nke ihe ngosi stereo FM sịnịma. Rịba ama udiri ụda olu nke pilot na 19kHz.
Ntinye si LPFs aka ekpe na aka nri na-etinyere na mgbochi otutu (MPX). A na-eji nke a emeputa nchikota (aka ekpe tinyere aka nri) yana ihe di iche (aka ekpe - aka nri) nke na - emeghari ya ugbu a n’elu onye na - ebu 38kHz. A na-emechirịrị onye na - ebu (ma ọ bụ wepụrụ ya) iji nye akara ngosi n'akụkụ ihe eji ebu mmadụ ụzọ. A na-agwakọta ya na ngụkọta nchịkọta (+) na olu olu 19kHz iji nye nsonaazụ mgbapụta nke ọma (ya na ihie stereo zuru ezu) na pin 5.
The oruru na ọkwa nke 19kHz ụda pilot na-edoziri site na iji a capacitor na pin 19.
Fig.3 na egosiputa udiri ihe nlere nke ihe eji egosi otutu ihe. Ihe nrịba ama (L + R) nwere ọnụọgụ ugboro site na 0-15kHz. N'ụzọ dị iche, akara nrịba ụzọ abụọ na-egbochi (LR) nwere sideband dị ala nke na-esite na 23-38kHz na elu sideband si 38-53kHz. Dịka anyị kwuru, ụgbọelu 38kHz anọghị.
Olu ụda ụgbọ elu 19kHz dị, agbanyeghị, a na-eji nke a na nnata FM iji wughachi ihe dị n'okpuru ala 38kHz ka o wee nwee ike idozigharị ihe ntụpọ stereo.
A na-enweta akara mgbapụta otutu 38kHz na ụda pilot 19kHz site na ịkesa oscillator 7.6MHz nke dị na pinti 13 & 14. Oge mbụ e kewara anọ iji nweta 1.9MHz wee kesaa 50 site na iji nweta 38kHz. Nke a ga - ekewa abụọ site na iji nweta ụda olu pilot 19kHz.
Na mgbakwunye, akara 1.9MHz kewara ka 19 iji nye mgbama 100kHz. A na-etinyere ihe mgbaàmà a na onye na-achọpụta usoro ahụ nke na-enyochapụta nsị ahụ mmemme ahụ. Ihe omume mmemme a bụ ihe nkesa nke na-ewepụta ihe ngosipụta RF.
Etubere nkewa nke counter a n'ọtụtụ voltaji na ntinye D0-D3 (atụdo 15-18). Dịka ọmụmaatụ, mgbe D0-D3 dị ala, ihe mmemme na-ekewa 877 Ya mere, ọ bụrụ na RF oscillator na-agba na 87.7MHz, mmepụta sitere na tebụl ga-abụ 100kHz, nke a dọrọ ugboro ole e kewara na 7.6MHz oscillator kristal (ya bụ, 7.6MHz kewara site na 4 ekewa ya na 19).
Fig.4: okirikiri zuru ezu nke Stereo FM Micromitter. DIP switches S1-S4 setịpụrụ RF oscillator ugboro RF ma na-achịkwa nke a site na PLL na ntụtụ 7 nke IC1. Ihe a rụpụtara Q1 nke n'aka nke na-emetụta volta njikwa na VC1 iji gbanwee ikike ya. Mmepụta ọdịyo mejupụtara na pin 5 na-enye mgbanwe ụda ugboro.
Na omume, ihe na-achọpụta usoro a na pin 7 na-arụpụta akara nke njehie iji jikwaa voltaji etinyere na varicap diode. Egosipụta varicap diode (VC1) na eserese sekọndrị (fig.4) ma bụrụ akụkụ nke RF oscillator na pin 9. Ogologo os osọlọkishụ ahụ kpebisiri ike site na uru ihe dị na ike ya na mkpokọta ya na ibe ya.
Ebe ọ bụ na varicap diode bụ akụkụ nke ikike a, anyị nwere ike ịgbanwe ugboro ugboro RF oscillator site n'ịgbanwe ọnụ ahịa ya. N'ime ọrụ, ikike ikike nke varicap diode dịgasị iche na dọkụment DC nke etinyere na ya site na njikwa onye na-achọpụta ihe ngosi PLL.
Na omume, onye na-achọpụta usoro a na-edoziri ịgbado ọkụ volicap ka nkewa RF oscillator nkewa ekewa bụ 100kHz na ntanetịpụta ihe mmemme ahụ. Ọ bụrụ na RF ugboro gafere elu, ihe anapụta ugboro site na onye na-ekere òkè ihe mmemme na-ebili ma onye ahụ na-achọpụta ihe ga-ahụ “njehie” n'etiti nke a na 100kHz nyere site na kristal nyere.
N'ihi ya, onye na-achọpụta usoro na-ebelata ọkụ ọkụ DC nke etinyere na varicap diode, si otú a na-abawanye ikike ya. Nke a na ibelata oscillator ugboro iji weghachite ya na “igbachi”.
Ọzọ, ọ bụrụ na RF ugboro na-agbada ala, ihe nrụpụta programmable programm ga-adị ala karịa 100kHz. Nke a pụtara na onye na-achọpụta ihe na-eme ugbu a na-eme ka volta DC etinyere na varicap ahụ belata ike ya wee bulie ugboro RF. Dịka nsonaazụ, usoro nzaghachi nzaghachi nke PLL a na-achi achi na nbudata onyonye ihe omume na-abụzigharị na 100kHz ma si otu a na - enwe nchedo nke oscillator RF
Site na-agbanwe onye na-ekewa ihe mmemme, anyị nwere ike ịgbanwe ugboro RF. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị etinye onye na-ekewa ya na 1079, RF oscillator ga-arụ ọrụ na 107.9MHz maka mmepụta nkesa nke nkesa ka ọ nọrọ na 100kHz.
N’ezie, iji bufee ozi ọdịyo, anyị kwesịrị ịgbanwetụ RF oscillator ịgbanwetụ ya ugboro ugboro. Anyị na-eme nke ahụ site na ịgbanye voltaji etinyere na varicap diode site na iji nrịbapụta akara nke olu dị na pin 5.
Mara, kwa, na nkezi oge nke RF oscillator (yabụ, ụgbọelu na-ebugharị ugboro ole) ka na-agbanwe, dị ka nke onye na-ekesara ihe (ma ọ bụ igwe ihe mmemme) setịpụrụ. N’ihi nke a, mgbanaka FM na-ebunye dịgasị n’otu akụkụ nke ugboro ole ọ na-ebu n’obere dabere n’usoro ọkwa nke mejupụtara - ya bụ, a na-agbanwe ya ugboro ugboro.
Nhọrọ Filter Band band
Anyị emebela kọmpụta PC ka ọ nwee ike ịnabata nzacha bandband dị iche na ntinye 11 RF pin nke IC1. Sọshin a bụ nke Soshin Eletrọniki Co. A kpọkwara ya GFWB3. Ọ bụ obere nzacha bandwidụ 3-ebi akwụkwọ na-ebipụta ma na-arụ ọrụ na mmachi ugboro 76-108MHz.
Uru dị na iji nzacha a bụ na ọ nwere ọtụtụ steeper rolloff n'elu na n'okpuru FM band. Ihe ndị a na - ebute nnyonye anya dị n'akụkụ ibe n'oge ndị ọzọ. Ihe ndọghachi azụ bụ nzacha ahụ siri ike inweta.
Na omume, nzacha ahụ dochie anya 39pF capacitor, jiri eriri etiti ụwa nke nzacha ahụ na-ejikọ na kọmiti PC ụwa. Ọ bụ ya mere enwere oghere n'etiti 39pF capacitor na-eduga. Achọghị 39pF na 3.3pF capacitors na 68nH na 680nH inductor, ebe ntụgharị waya ji 68nH inductor dochie ya.
Fig.5 (a): eserese a gosipụtara etu esi etinye akụkụ akụkụ elu anọ n'akụkụ akụkụ ọla kọpa nke PC. Gbaa mbọ hụ na IC1 & VC1 na-eduzi n'ụzọ ziri ezi.
Rịba aka ugbu a na fig.4 maka eriri zuru ezu nke Stereo FM Micromitter. Dị ka a tụrụ anya, IC1 na-akpụzi akụkụ bụ isi nke sekit ahụ ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ agbakwunyere iji mezue nnyefe redio stereo FM.
A na-enye ihe ntinye ụda aka ekpe na aka nri site na 1μF bipolar capacitors wee tinye ya na seintéria mejupụtara 10kΩ ndị na-eguzogide ihe na 10kΩ trimpots (VR1 & VR2). Site n'ebe ahụ, a na-ejikọ akara ndị ahụ na atụdo 1 & 22 nke IC1 site na 1μF electrolytic capacitors.
Rịba ama na 1poF bipolar capacitors ka agụnyere iji gbochie ngbanye DC ugbu a n'ihi ihe DC ọ bụla na ntanetị mgbapụta. N'otu aka ahụ, ikike 1μF na pị 1 na 22 dị mkpa iji gbochie DC ugbu a na trimpots, ebe ọ bụ na ntinye ntinye abụọ ndị a na-emekpa ụtụ na ọkara. Railzọ ụgbọ mmiri na-eweta ọkara dị mma site na iji 10μF capacitor na pin 4 nke IC1.
Ihe ikike 2.2nF nke ga –esi ike dị na pịnyere 2 & 21, ebe ndị 150pF capacitors na atụ 3 & 20 setịpụrụ ntụpọ ọkwa dị ala. Enwere ike idobe ọkwa pilot na pin 19 - agbanyeghị, nke a anaghị adịkarị mkpa ebe ọ bụ na ọkwa ahụ dabara adaba na-enweghị mgbakwunye.
N'ezie, ịgbakwunye capacitor ebe a na-ebelata izu stereo n'ihi na agbanweela ụda ụda pilot ma e jiri ya tụnyere ọnụego multiplex 38kHz.
A na-eme oscillator 7.6MHz site na ijikọ kristal 7.6MHz n'etiti atụdo 13 & 14. Na omume, a na-ejikọ kristal a n'otu akụkụ na ogbo inverter. Kristal na-edobe ugboro nke oscillation, ebe ndị ike 27pF na-enye nkwado ziri ezi.
Fig.5 (b): nke a bụ otu esi etinye akụkụ ya n’elu PC bọọdụ iji wuo ụdị nkwụnye ahụ. Rịba ama na IC1, VC1 na 68nH & 680nH inductor bụ ngwaọrụ dị n'elu ma agbadoro n'akụkụ ọla kọpa nke bọọdụ dịka egosiri na fig.5 (a)
Onye setere ihe mmemme (ma ọ bụ ihe omume mmemme) bụ nke atọbere site na iji ntụgharị na pin 15, 16, 17 & 18 (D0-D3). A na-ejikarị ntinye ndị a dị elu site na ndị na-eguzogide 10kΩ ma na-agbadata mgbe a na-emechi switches. Tebụlụ 1 na-egosi etu esi edobe switches iji họrọ otu n'ime ugboro 14 nnyefe nnyefe.
Nmepụta Rc oscillator dị na 9. Nke a bụ Colpitts oscillator ma bụrụ nke a na-elegharị site na iji inductor L1, ihe 33pF & 22pF capacitors na varicap diode VC1.
Ngwunye 33pF nwere ikike abụọ na-arụ ọrụ abụọ. Nke mbu, ọ na - egbochi voltaji DC nke etinyere na VC1 iji gbochie nke ugbu a ịbanye na L1. Nke abuo, n’ihi na onyonyo na VC1, o na –ebelata mmetuta nke mgbanwe ngbanwe varicap, dika “huru” site na ntụtụ 9.
Nke a, n'aka nke a, na-ebelata ngụkọ oge nke RF oscillator n'ihi mgbanwe nke ọkụ ọkụ varicap ma na-enye ohere njikwa mkpọchi mkpọchi ka mma.
N’otu aka ahụ, ikike nke 10pF na-egbochi DC ugbua ịgbanye L1 site na pin 9. Uru dị ala pụtakwara na seraki na-emegharị bụ naanị ọjị na nke a na-enye ohere maka ihe Q dị elu maka seraị na -eme ka ọ dị mfe ịmalite oscillator.
Fig.6: nke a bụ otu esi emezi bọọdụ maka ụdị batrị kwadoro. Ọ bụ naanị ihe ịhapụ D1, ZD1 & REG1 na ịwụnye njikọ ekwentị abụọ.
Ihe nrịba ama nke ihe mejupụtara gosipụtara na pin 5 ma nye ya nri site na 10μF capacitor iji dozie VR3. Nke a trimpot na-esetịpụ omimi omimi. Site n'ebe ahụ, a na-enye akara mgbapụta ahụ site na 10μF capacitor ọzọ na ndị na-eguzogide 10k two abụọ dị iche iche na-emetụta vic1 diode VCXNUMX.
Dịka anyị kwuru na mbụ, a na-eji ndọtị mkpọchi mkpọchi (PLL) na pin 7 na-ejikwa akara ụgbọelu. Nsonaazụ a na - arụpụta ihe nrịba elu Darlington transistor Q1 ma nke a, n'aka nke ya, na - etinye voltaji akara na VC1 site na ndị nrụgide usoro 3.3kΩ abụọ na 10kΩ kewapụrụ resistor.
Ihe 2.2nF capacitor na nkwụsị nke ndị na-eguzogide 3.3kΩ abụọ na-enye nzacha oge.
Enwetara nzacha ọzọ site na 100μF capacitor na 100Ω resistor nke ejikọtara n'usoro dị n'etiti ntọala Q1 na onye nnakọta. Onye nguzogide 100Ω na-enye transistor aka ịzaghachi mgbanwe mgbanwe dị ugbu a, ebe 100μF capacitor na-enye nzacha obere oge. A na-enye mgbakwunye elu oge ọkụ site na 47nF capacitor ejikọtara ọnụ n'etiti ntọala Q1 na onye nchịkọta.
5.1kΩ resistor nke ejikọtara na ụgbọ okporo ígwè 5V na-enye ndị na-anakọta ihe. Onye na-eguzogide ihe na-adọta onye na-anakọta Q1 dị elu mgbe transistor apụ.
Mmepụta RF modulated na-egosi na ntụtụ 11 ​​ma nye ya nri na nzacha bandc LC na-agafe agafe. Ọrụ ya bụ iwepu nsonaazụ ọ bụla nke mgbanaka mepụtara na mmepụta oscillator RF. N'ụzọ bụ isi, nzacha ahụ gafere ugboro 88MHz ma ọ na - akpọpu ugboro ugboro ihe mgbaàmà dị n'okpuru na n'okpuru a.
Ihe nzacha ahụ nwere oke nke 75Ω na nke a dakọtara ma ntụtụ nrụpụta IC1 nke 11 na sekit na-eso ya.
Ndị na-eguzogide abụọ nke 39Ω na 56W shunt resistor na-etolite onye na-enyocha ya na nke a na-ebelata ọkwa mgbaàmà na antenna. Onye na-etinye ihe a dị mkpa iji hụ na onye na-ebugharị ọrụ na-arụ ọrụ na ikike akwadoro 10μW.
Fig.7: eserese a na-egosi nkọwa ikuku nke mkpuchi igwe mkpuchi maka Lil L1. A ga-ewepụ onye nke ọ bụla ka o wee nọrọ ihe karịrị 13mm n'elu bọọdụ ahụ. Jiri silikion sealant jigide ihe mbụ dị na ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A na-enweta ike maka sekit ahụ ma ọ bụ na batrị 9-16V DC ma ọ bụ batrị 6V.
N'ihe banyere mbunye ngwa ngwa, a na-enye ike ya site na ịgbanyụ ngbanyụ S5 na diode D1 nke na-enye nchedo polarity ntụgharị. ZD1 na-echekwa sekit na-agaghị ebugharị ikuku ọkụ, ebe onye na-achịkwa REG1 na-enye ụgbọ oloko + 5V kwụ ọtọ iji mee ka sekit ahụ nwee ike.
N'aka nke ọzọ, maka ịrụ ọrụ batrị, a dịghị eji ZD1, D1 na REG1 na njikọta nke D1 na REG1 dị mkpụmkpụ. Oke kachasị maka IC1 bụ 7V, yabụ arụ ọrụ batrị 6V dabara adaba; dịka 4 x AAA sel n’ime ihe 4 x AAA nwere.
Otu otu PC kọfị 06112021 na ịlele naanị 78 x 50mm na-ejide akụkụ ahụ niile maka Micromitter. A na-etinye nke a n'ime akpa plastik na-atụ 83 x 54 x 30mm.
Nke mbụ, chọpụta na bọọdụ PC dabara na ikpe ahụ nke ọma. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka etinyere nkuku ndị ahụ iji dụnye n’elu ogwe nkuku ndị dị n’elu igbe. Emere nke ahụ, lelee na oghere maka DC sọks na RCA sọks ndị ziri ezi. Ọ bụrụ na nke mbu L1 enweghị isi (lee anya n'okpuru), a na-akwụnye ya site na ịkwanye ya n'ime oghere nke ga-ezuru ike iji jide ya n'ọnọdụ. Lelee na oghere a nwere dayameta ziri ezi.
Fig.5 (a) & Fig.5 (b) gosiputara otu esi etinye akụkụ ahụ n’elu bọọdụ PC. Ọrụ mbụ bụ ịwụnye ọtụtụ ihe n’elu-elu n’elu ọla kọpa nke bọọdụ PC. Akụkụ ndị a gụnyere IC1, VC1 na inductor abụọ.
Will ga-achọ ezigbo ígwè ọkpọ, tweezers, ọkụ dị ọkụ na iko na-ebuli elu maka ọrụ a. Kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị ihe, mkpa idozi ígwè ahụ site na itinye ya na mpempe ihe mkpuchi dị warara.
Ọ dị mma ịwụnye akụkụ akụkụ elu anọ mbụ (gụnyere IC), tupu ịwụnye akụkụ ndị ọzọ dị n'elu PC PC. Rịba ama otú anụ ahụ nke kristal dị n'akụkụ ndị abụọ na-eguzogide n'akụkụ 10kΩ (foto aka ekpe).
IC1 na varicap diode (VC1) bụ ngwaọrụ ndị nwere ikike, yabụ jide n'aka na ị ga-atụkwasị ha anya dịka esi egosi na ihu ya. A na-etinye akụkụ nke ọ bụla site na ijide ya na ntanye ma jirizie otu ụzọ (ma ọ bụ pin) buru ụzọ. Emere nke ahụ, lelee na etinyere akụkụ ahụ n'ụzọ ziri ezi tupu i kpachara anya maka ụzọ ndị ọzọ dị.
N'ihe banyere IC, ọ kacha mma ibu ụzọ jiri obere nke ọ bụla kekọta mkpụrụ ya tupu etinye ya na bọọdụ PC. Ọ bụ mgbe ahụ ka okwu banyere isi nke ọ bụla na isi ya na mkpo ya n'ọnụ iji gbanye ya ebe.
Jide n'aka na ị ga-eji ọkụ siri ike na iko na-ebuli elu maka ọrụ a. Nke a agaghị eme ka ọrụ ahụ dị mfe mana ọ ga-enyekwa gị ohere inyocha njikọ ọ bụla ka esi eme ya. Karịsịa, gbaa mbọ hụ na enweghị mkpụmkpụ n'etiti egwu dị n'akụkụ ma ọ bụ atụdo IC.
Na mmechi, jiri multimita gị tulee na ntụtụ ọ bụla ejikọtara n'ụzọ egwu ya na PC PC.
A na-etinye akụkụ ndị ọzọ dị n’elu akuku PC PC dịka a na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-ewulite ụdị nke nkwụnye ọkụ, gbasie eserese a na-egosi na fig.5. N'aka nke ọzọ, maka ụdị batrị ahụ, pụọ na ZD1 na DC soket ma jiri njikọ waya dochie D1 & REG1 na njikọ ekwentị dịka egosipụtara na fig.6.
Bido ọgbakọ dị elu site na ịwụnye ndị na-eguzogide na njikọ njikọ waya. Tebụl 3 na-egosi Koodu agba resistor mana anyị na-akwadokwa ka ị jiri multimita dijitalụ na-enyocha ụkpụrụ. Mara na ọtụtụ n’ime ndị guzogidere n’ọgwụgwụ na-echekwa ohere.
Ozugbo ndị mmegide ahụ batara, wụnye pipụ PC na mbido antenna na akara ule TP GND na TP1. Nke a ga - eme ka ọ dịkwuo mfe ijikọ na isi okwu ndị a ma emechaa.
Ọzọ, wụnye trimpots VR1-VR3 na PC-mount RCA sockets. Enwe ike itinye DC soket, diode D1 na ZD1 maka ụdị nkwụnye ahụ.
Ndị nwere ike ịbanye na nke ọzọ, na-elekọta iji wụnye ụdị electrolytic na polarity ziri ezi. Enwere ike ịwụnye NP (nke na-akwadoghị) ma ọ bụ bipolar (BP) n'ụdị electrolytic. Rụda ha gbadata n'ime oghere ha, ka ha wee ghara ịnọdụ ala karịa 13mm n'elu bọọdụ PC (nke a bụ iji mee ka mkpuchi ahụ dabara nke ọma mgbe batrị AAA na-etinye n'okpuru bọọdụ PC n'ime igbe).
Enwekwara ike itinye eriri seramiiki na ogbo a. Tebụl 2 na-egosi koodu akara ha, iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịchọpụta ụkpụrụ.
Fig.7 na-egosi nkọwa nke ikuku maka coil L1. O nwere ihe ntụgharị ọla abụọ (2.5) 0.5 - 1mm gbara ọkpụrụkpụ ọla kọpa (ECW) na eriri igwe a na-agbanye na mbụ na mmaji F29. N’aka ozo, I nwekwara ike iji udiri azumahia ọ bụla meghaara 2.5.
Mersdị ndị former abụọ dị - nke nwere ntọala nwere ihe abụọ (nke nwere ike ree na bọọdụ PC) na nke na-enweghị ntọala. Y’oburu na mbu nwere okpu, aghaghi ibu ihe ruru 2mm ka oghari ya, ka ogba n’ogologo ya gunyere 2mm. Enwere ike ịme nke a site na iji mma-mịga aja mma.
Emere nke ahụ, kpoo eriri igwe, kwụsị nsọtụ ya na atụdo ma resị eriri igwe ahụ n'ọnọdụ. Mara na ntụgharị ahụ dị n'akụkụ ibe ha (ya bụ, eriri igwe na -echi ọnya).
Foto a gosipụtara etu esi mee ka ikpe ahụ were were sọks RCA, sọks ike na ụzọ mgba ọkụ.
N’aka ozo, oburu na nke mbu enweghi isi, kpochapu olu olu n’otu njedebe, ghazie igba n’ime komputa PC n’ebe onodu L1 ka nke mbu buru ihe kwesiri ekwesi. Emere nke ahụ, gbanye nke mbụ n'ime oghere ya, kpọnụ eriri igwe ahụ ka ikuku nke dị ala na-anọdụ n'elu oche.
Jide n'aka na ị ga-ewepụ ihe mkpuchi na waya ahụ tupu iwepuga ihe na-eduga na kọmpụta PC. Enwere ike iji mmiri ole na ole nke silicone sealant iji hụ na eriri igwe na-anọ na mbụ.
N'ikpeazụ, enwere ike itinye slug ahụ ferritụ na mbụ ma ghaa wee mee ka elu ya wee fechaa elu nke mbu. Jiri ngwa plastik ma ọ bụ ọla nchara kwesịrị ekwesị ka ọpịchaa na slug - ihe mkpuchi nkịtị nwere ike ịgbawa ferrite.
Enwere ike itinye Crystal X1 ugbu a. Nke a na-ebu site na-agbaji ụzọ mbu ya site na 90 digiri, nke mere na ọ na-anọdụ n ’ụdị nhịahụ gafee nọnyeaka abụọ dị n'akụkụ 10kΩ (lee foto) Enwere ike mezue nzukọ nke kọmitii ahụ site na ịwụnye DIP mgba ọkụ, transistor Q1, onye nhazi (REG1) na ụzọ antenna.
Antenna ahụ bụ naanị ụdị ọkara ọkara-ebugharị nke ọkara. Ọ mejupụtara eriri ogologo nke mpe mpe mpe mpe 1.5m, na otu njedebe rere na ọdụ antenna. Nke a kwesịrị inye nsonaazụ dị mma ma ọ bụrụhaala na nnyefe mgbasa ozi.
A ga-atụgharị uche ugbu a na ikpe plastic. Nke a chọrọ oghere na otu njedebe iji nabata sọks RCA, tinye oghere na nsọtụ nke ọzọ maka ogwe antenna na ike DC (ọ bụrụ na ejiri ya).
Na mgbakwunye, ekwesịrị itinye olulu na mkpuchi maka ịgbanye ọkụ.
Enwere ike ịkwado sekit site na mkpụrụ ndụ 4 x 1.5V AAA ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka unit ahụ dịrị. Rịba ama na njide batrị chọrọ ka ụfọdụ gbanwee iji dabara n'ihe niile dị na okwu ahụ (lee ederede).
Ọ dịkwa mkpa iwepu ihe ndị dị n'ime na mgbidi nke ikpe ahụ ruo omimi nke 15mm n'okpuru elu igbe ahụ, iji wee kwekọọ bọọdụ PC. Anyị na-eji mkpịsị osisi dị nkọ wepu ndị a mana enwere ike iji obere grinder. Emere nke a, ịkwesịrị iwepu njedebe ọgịrịga n'okpuru mkpuchi iji kpochapụ n'elu RCA na DC ukwu. Enwere ike itinye akara mpempe ihu n'ihu mkpuchi ahụ.
-Dị batrị nwere batrị AAA a kpọchiri akpọchi n'ime igbe ahụ, ebe onye na-ejide ya na kọntaktị n'akụkụ ọla kọpa nke PC. Enwere nanị ọnụ ụlọ zuru oke maka ihe njide a na PC PC iji bulie n'ime ikpe ahụ na usoro ndị a:
(1). Akụkụ niile ewezuga ike ngbanye ọkụ ekwesighi ịdị n'elu PC PC karịa 5mm. Nke a pụtara na ndị na - ahụ ọkụ electrolytic ga-anọdụ ala na PC kọmpụta ahụ nakwa na a ga-egbutu ihe mbụ L13 na ogologo ya.
(2). Ihe njide mkpụrụ ndụ AAA dị ihe dị ka 1mm gbara ọkpụrụkpụ ma ekwesịrị idebanye ya na nsọtụ nke ọ bụla, nke mere na mkpụrụ ndụ ndị ahụ na-agbatịkwu ntakịrị n’elu ihe njide ahụ.
(3). Ibe ukwu nke RCA nwekwara ike ịchọ ndozi ntakịrị, nke mere na enweghị oghere dị n'etiti igbe na mkpuchi mgbe mgbakọ gachara.
Ekwesịrị ka onye na-ebugharị stereo redio FM na - agbaso na Redio Nkwukọrịta Nkwado nwere ike inweta (LIPD) Class Class 2000, nke Communicationslọ Ọrụ Nkwukọrịta Australia nyere.
Karịsịa, oge mgbasa ga-adị n'etiti ụgbụ 88-108MHz na EIRP (Ike Ikike Mbara ọkụ Radiat) nke 10mW na ngbanwe ọkụ FM enweghị ọnụọgụ 180kHz. Mgbasa ozi ahụ agaghị anọ n'otu ulọ ọrụ redio na-agbasa ozi (ma ọ bụ ebe ntụgharị ma ọ bụ ebe ntụgharị) na-arụ ọrụ n'ime mpaghara ikikere.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na www.aca.gov.au na saịtị weebụ.
Enwere ike ibudata ozi ikike klaasị maka LIPDs:
Nnwale & mmezi
Akụkụ a bụ ezigbo nri. Ọrụ mbu bụ imegharị L1 ka RF oscillator rụọ ọrụ karịa usoro dịịrị. Iji mee nke ahụ, soro usoro nzọụkwụ a:
(1). Tọọ oge ntụgharị site na iji ntụgharị DIP, dị ka egosipụtara na Isiokwu 1. Mara na ịkwesịrị ịhọrọ ugboro ole na-ejighị dị ka ebe azụmahịa na mpaghara gị, ma ọ bụrụ na ndabichi ga-abụ nsogbu.
(2). Jikọọ ọtụtụ ebumnuche multimeter gị na TP GND na ezigbo ụzọ nke pin pin 8 nke IC1. Họrọ oke ọkụ ọkụ DC na mita ahụ, tinye ike na Micromitter ma chọpụta na ị nwetara ọgụgụ dị nso na 5V ma ọ bụrụ na ị na-eji nkwụnye DC.
N'aka nke ọzọ, mita ahụ kwesịrị igosipụta batrị batrị ma ọ bụrụ na ị na-eji sel AAA.
(3). Bugharịa ụzọ ziri ezi multimeter na TP1 ma mezie slug na L1 maka ọgụgụ dị ihe dị ka 2V.
Ihe njide batrị na-anọdụ ala ikpe ahụ, n'okpuru bọọdụ PC.
Oscillator emeziela. Enweghị ngbanwe ọ bụla na L1 ka achọrọ ma ọ bụrụ na i mechara gbanwee ugboro ugboro ọzọ n’etiti ụyọkọ ahọrọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agbanwee ugboro ole ihe dị na igwe ọzọ, aga-agharịrị L1 ka ọ gụọ ọgụgụ 2V na TP1.
Tingtọ olulu ego
Fig.8: olu ihe ngbochu ihu nile.
Ihe niile dị ugbu a bụ idozi trimpots VR1-VR3 iji tọọ ọkwa mgbapụta na omimi mgbanwe. Nzọụkwụ nke usoro dị ka ndị a:
(1). Tọọ VR1, VR2 & VR3 n'ọnọdụ ha. Enwere ike idozi VR1 na VR2 site na ịgafe ihe mkpuchi si na etiti nke RCA μ, ebe VR3 nwere ike idozi site na ibugharị μF capacitor n'ihu ya n'otu akụkụ.
(2). Soro ụda redio siterio ma ọ bụ redio na-ebugharị ugboro. Ekwesịrị idowe FM na enyefe ya ihe dị ka mita abụọ iche.
(3). Jikọọ ihe nrịba ama stereo (wdg., Ihe ọkpụkpọ CD) na ntinye oghere RCA ma lelee na ihe nlele ma ọ bụ redio natara ya.
Fig.9: Usoro zuru oke zuru oke maka bọọdụ PC.
(4). Megharia VR3 anticlock ya ruo mgbe ngosipụta stereo na-apụ na nnata, wee dozie VR3 n'otu elekere site na ọnọdụ a site 1/8 nke ntụgharị.
(5). Ghazie VR1 na VR2 maka ụda kachasị mma site na ihe nlele - ị ga-ebipu isi ihe mgbaàmà nwa oge iji wee nwee nhazi ọ bụla. Ekwesịrị inwe mgbaàmà zuru ezu iji “kpochapụ” mkpọtụ ụda ọ bụla ma na-enweghị mgbanwe ọ bụla.
Mara nke ọma na VR1 na VR2 ga-edozịrị nke ọ bụla ka ha nọrọ n'otu ọnọdụ, ka ha nwee ike nwee nguzo aka ekpe na aka nri.
Ọ bụ ya - Stereo FM Micromicer ọhụrụ gị dị njikere maka ime ihe.
Isiokwu 2: Koodu Capacitor
uru Koodu IEC Koodu EIA
Tebụl 3: Koodu Mpempe Resistor
Ee e uru Koodu onu ogugu 4 (1%) Koodu onu ogugu 5 (1%)
1 22kΩ agba aja aja na-acha ọbara ọbara acha ọbara ọbara uhie na-acha ọbara ọbara
8 10kΩ aja aja aja aja na agba aja aja aja aja na-acha aja aja ojii na-acha ọbara ọbara
1 5.1kΩ agba aja aja na-acha ọbara ọbara aja aja aja aja aja aja aja aja na agba aja aja
2 3.3kΩ agba aja aja na-acha ọbara ọbara agba aja aja na agba aja aja na agba aja aja
1 100Ω aja aja aja aja aja aja aja aja aja aja ojii na-acha aja aja ojii
1 56Ω acha anụnụ anụnụ na agba aja aja aja aja acha ọbara ọbara na-acha ọcha na agba aja aja
2 39Ω oroma oji di oji ọla edo ọcha na agba aja aja
1 PC osisi, koodu 06112021, 78 x 50mm.
Igbe ihe eji eme plastic, 1 x 83 x 54mm
1 akara nzụkọ n'ihu, 79 x 49mm
1 7.6MHz ma ọ bụ 7.68MHz kristal
1 SPDT subminiature mgba ọkụ (Jaycar ST-0300, Altronics S 1415 ma ọ bụ equiv.) (S5)
2 PC-Mount RCA sockets (gbanwere) (Altronics P 0209, Jaycar PS 0279)
1mm PC-Mount DC sọks ike
Ntugharị DIP 1 4 ụzọ
1 2.5 na-agbanwe eriri igwe na-agbanwe (L1)
1 680nH (0.68μH) elu inductor dị n’elu ugwu (1210A ikpe) (Farnell 608-282 ma ọ bụ ihe yiri ya)
Ihe ntụgharị nke 1 68nH dị n’elu ugwu (0603 ikpe) (Farnell 323-7886 ma ọ bụ ihe yiri ya)
1 100mm ogologo 1mm enọ ọla kọpa
1 50mm ogologo 0.8mm tinned ọla kọpa
1 1.6m ogologo nke eriri nkochi
3 PC echere
1 4 x AAA njide ekwentị (achọrọ maka ịrụ ọrụ batrị)
4 Mkpụrụ ndụ AAA (achọrọ maka ịrụ ọrụ batrị)
3 10kΩ vetikal trimpots (VR1-VR3)
Ndi ihe omumu
1 BH1417F Rohm elu-ugwu FM stereo na-enyefe (IC1)
1 78L05 nchịkwa dị ala (REG1)
1 ZMV833ATA ma ọ bụ MV2109 (VC1)
2 10nF (.01μF) seramiiki
1 330pF seramiiki
2 150pF seramiiki
1 39pF seramiiki
1 33pF seramiiki
2 27pF seramiiki
1 22pF seramiiki
1 10pF seramiiki
1 3.3pF seramiiki
Oge nnyefe 87.7MHz ruo 88.9MHz na usoro 0.2MHz
106.7MHz ruo 107.9MHz na usoro 0.2MHz (mkpokọta 14)
Mkpokọta Mgbasa Harmonic (THD) a 0.1%
Nkpuru mbu Elezie 50ms
Mpempe Obere 15kHz / 20dB / afọ iri
Nkewa ọwa a 40dB
Itule ọwa n'ime? 2dB (enwere ike idozi ya na trimpots)
Mgbanwe pilot 15%
Ike nrụpụta RF (EIRP) a 10μW mgbe ị na-eji inbuilt attenuator
Tụkwasịnụ voltaji 4-6V
Tụkwasịnụ ugbu a 28mA na 5V
Olu ntinye olu 220mV RMS kachasị na 400Hz na 1dB mkpachi na-egbochi
You nwere ike ịzụta ngwaahịa kwuru n'isiokwu a ebe a:
ST0300: SP-MINI TOGGLE SPDT SOLDER TAG TARA
Ihe nbudata ndia di maka edemede a:
Onye isi nchụaja Micromitter
Ogwe dị n'ihu Micromitter